Bombardier CRJ installed ပေမယ် doesn; t ကိုပြင်ဆင်မှု 3d v4.5 ပေါ်လာမှာ
မေးခွန်း Bombardier CRJ installed ပေမယ် doesn; t ကိုပြင်ဆင်မှု 3d v4.5 ပေါ်လာမှာ
11 လအတွင်း3days ago - 11 လအတွင်း3days ago #1425 by thaiphoon
အဘယျသို့အဆင်းလှသောလေယာဉ် Erik! ဖြစ်ကောင်းအလှဆုံးသေးငယ်တဲ့ခေတ်ပြိုင်ဒေသဆိုင်ရာဂျက်။
ငါလေယာဉ်က download လွယ်ကူသော installer ကိုအတူက installed, ဟုတ်ကဲ့ပေါ်တွင်နှိပ်လိုက်: သာလျှင် Prepar3dv4 သည့်အခါသတိပေးခံရ, ဒါပေမယ့်ငါပြင်ဆင်မှုဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာလေယာဉ်တက်မပြထားဘူး။
တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းငါသည်ဤ AC အများအတွက် update ကိုရှိကွောငျးအားကြားပြောလေ၏, ဒါပေမယ့်ကိုယ်အပါအဝငျကြောင်းဖိုင်ကိုငမည်သို့မသိခဲ့ပေ။ မည်သူမဆို, ကျေးဇူးပြု. ကူညီပေးနိုငျသနညျး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပိုဆောင်းမှတ်စု: ငါ installed နှင့်အတူတူပင်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်, လေယာဉ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြုတ်ပါပြီ။ ငါ (?? ဘယ်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်) ကို updates များကိုကြည့်ရှုပေမယ့် updates များကိုအခြားအကြောင်းအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏နေကြသည်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 11 လအတွင်း3days ago အားဖြင့် thaiphoon။ အကြောင်းပြချက်: ပိုပြီးအချက်အလက်ကဆက်ပြောသည်
11 လအတွင်း2days ago #1426 by rikoooo
သင်တစ်ဦး update ကိုရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်အတိုင်း, နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်:
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: alinho
11 လအတွင်း2days ago #1427 by thaiphoon
ငါသည်သင်တို့၏အကူအညီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှအလိုရှိ၏။ ယခုအသစ်ဒေါင်းလုပ်ကယ့်ကိုအလုပ်ကိုပြု၏။ သငျသညျရော်ဂျာဖက်ဒရေးရှင်းအဖြစ်အတူတူပျံသန်းခြင်း simulation ၏ပညာရှင်, (မွန် compatriote) တင်းနစ်အတွက်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရမည်။
0.395 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်